Ciidaha Jaban ee Ogosto - Talooyin ku saabsan maalmahaaga nasashada | Safarka Absolut
Fasaxyo jaban bishii Ogosto
Waxaan u maleyneynaa in aan awoodno inaan ku raaxeysto fasaxyada jaban ee bisha Ogosto waxay ka mid tahay riyooyinka, laakiin maya. Had iyo jeer waxaa jira qaabab kale oo noqon kara kuwo la awoodi karo oo si weyn u beddeli kara fikradaha aan hayno. Weli waxaad haysataa waqti aad naftaada ku qanciso oo aad ugu baxdo si aad ugu raaxaysato xagaaga xagaaga heer sare.
Kaliya adigoo raacaya tillaabooyin ama talooyin taxane ah, waxaan ku socon doonaa wadada saxda ah si aan u helno kuwayaga hiigsiga riyada in la gaaro. Fasaxyada jaban ee bisha Ogosto mar dambe ma noqon doonaan riyo oo keliya, laakiin hadda sidoo kale waxay ku rumoobi karaan wax ka yar inta aad u malaynayso. Ha moogaanin waxa ku xiga!
1 Sida loo helo fasaxyo jaban bisha Ogosto, boos celin
2 Raadi meelaha taga meelaha baahida yar ay ka jirto
3 Hoy ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah u leh si lacag loo badbaadiyo
4 Ku safri kharashaad wadaag kooxeed
5 Waa maxay meelaha lagu booqdo Spain?
6 Baabuurka ama gaadiidka dadweynaha si aad ugu wareegto meesha aad u socoto?
Sida loo helo fasaxyo jaban bisha Ogosto, boos celin
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan qaadno waa inaan aadno mashiinka raadinta oo aan dooranno xulashada taariikhaha iyo meelaha loo socdo. Qaabkan, ayaa naloo tusi doonaa dhammaan xulashooyinka jira. Laakiin ma sahlana in la raadsado fasaxyo bisha Ogosto sidoo kale. Sidaa darteed, waxna ma ahan sameynta xulashada websaydhada ugu fiican oo had iyo jeer u digtoonaada isbeddelada qandaraaska taasi way muuqan kartaa. Markaad aragto qiimo macquul oo macquul ah oo diyaaradda ama hoteelka ah, waa waqtigaagii. Waxaa ugu wanaagsan in waqti yar la sii qabsado, maxaa yeelay waxaan badbaadin karnaa qadar fiican oo lacag ah. Waxa kale oo aad hubisaa inaad haysatid boos celinta gacantaada hoosteeda waadna daganaan doontaa ama daganaan doontaa ilaa maalinta weyni timaaddo.
Raadi meelaha taga meelaha baahida yar ay ka jirto
Haddii aan ku adkeysano inaan aadno meelaha dalxiiska loo dalxiis tago, way iska cadahay in qiimayaashu aad kor ugu sii kici doonaan. Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la doorto isbeddelka muuqaalka, laakiin dhinac walba. Ma jiraan wax ka hor imanaya hadda laakiin marwalba waxaan ku raaxeystaa waxa aan jecel nahay inaan wax badan qabanno. Xullo aagag aan aad u dalxiis badnayn, magaalooyin yar yar ama laga yaabee buuro halkii xeebta. Dabcan, heerkul sarre leh, haddii aad rabto xeeb, raadi kuwa ka fog dadweynaha guud. Waxaad ku raaxeysan doontaa dabeecadda aan la nadiifin waxayna noqon doontaa daah-fur dhab ah. Had iyo jeer waxaa jiri doona ikhtiyaari aad u jaban oo asal ah si aad ugu raaxeysan karto inta ugu badan.
Hoy ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah u leh si lacag loo badbaadiyo
Had iyo jeer waa arrin la fiirinayo, laakiin marar badan, awood u lahaanshaha hoyga iyo guddiga badh ama guddi buuxa way magdhabi doontaa. Maaddaama banaanka loo baxo si wax looga cuno waxay umuuqataa mid raqiis ah laakiin aakhirka xisaab sameynta, waxaan tabi doonaa qanjaruufo fiican. Haddii aad xulasho leedahay, isku day inaad doorato hoyga lagu daro cuntada. Haddii kale, waxaad mar walba dooran kartaa aqal leh jikad oo markaa aad ku diyaarsatid cunnooyinka waaweyn ee ku jira. Had iyo jeer way jaban doontaa!
Ku safri kharashaad wadaag kooxeed
Waa run oo marwalba lama qaban karo waana fahmaynaa taas. Laakiin weli, waa fikrad in maskaxda lagu hayo. Sababtoo ah haddii aad labo-labo gasho waxaad noqon doontaa sida oo kale qaybi kharashyada waana had iyo jeer caawimaad. Si la mid ah, waxaad dooran kartaa hoy aad u jaban runtii haddii aad maalin ku qaadan doontid xeebta. Ama, dulucda guryuhu weli waxay noqon doontaa mid faa'iido badan leh iyo marka lagu daro, samaynta cuntada ku jirta. Xaqiiqdii sidan waad ku qancin kartaa dadka waaweyn!
Waa maxay meelaha lagu booqdo Spain?
Waxaa laga yaabaa in sanadkaan aad rabto inaad sii joogto wadankeena oo aad booqato meelahaas aan ognahay, laakiin laga yaabee inaysan had iyo jeer shaqsi ahaan kuu muuqan. Markaa inaad ka fikirto inaad wax yar qaboojiso xagaaga, aagga woqooyi had iyo jeer waa mid gaar ah.
San Juan de Gaztelugatxe: Jasiirad ku taal badda Cantabrian, gaar ahaan Bermeo, oo ku taal waddanka Basque. Si aad u hesho, waxaad haysaa tallaabooyin taxane ah oo had iyo jeer loo baahan yahay in laga gudbo si loogu raaxeysto qarnigii sagaalaad, oo ku yaal meeshii ugu sarreysay. Aag sheeko xariir ah!
Jasiiradda Cies: Galicia oo dhan waa iyada meelo meela sixir ah. Meesha ay dabiicaddu kula kulanto badda oo ay nooga tagto aagag qurux badan sida tan. Waxay ku saabsan tahay Jasiiradaha Cíes, halkaas oo aan ka aragno muuqaal xeebo paradisiacal ah oo lagu daray dabeecadda. Waxay ku jiraan baahi badan iyo in ka badan xagaaga, laakiin waa u qalantaa.
Harooyinka Covadonga gudaha Asturias: Dabcan. Asturias sidoo kale waxay leedahay dhacdooyin aanan illoobi karin. Covadonga waa mid ka mid ah. Waxaad ka heli doontaa qulqulka weyn, laakiin waxaad mar walba dooran kartaa inaad joogto aag kale oo kuu dhow oo aad safarro u aaddo magaalooyinka ku dhow, adigoo booqanaya Cangas de Onís ama Ribadesella.
Ubansa iyo Andía Park Park gudaha Navarra: Halkee dabiicigu kugu soo dhawayn doonaa daqiiqada ugu horeysa.
Aaggii hore ee LeónWaqtiga firaaqada iyo ganacsigu labaduba way ku soo urureen dhexdeeda iyo dabcan, waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha lagama maarmaanka ah iyo meel lagu xisaabtamo.
sidaas darteed Fadhiiso Barcelona sida Besalú ee Girona ama Montserrat, iyaguna sidoo kale waa meelo ku habboon oo lagu raaxeysto inta lagu jiro fasaxyadaada. Adigoon ilaawin Malaga ama Almería iyo magaalooyinkooda kala geddisan, in kasta oo halkaas aan sidoo kale kulayl yar ku qaadan doono. Had iyo jeer waxaa jiri doonta meel wanaagsan oo adiga ku sugeysa.
Baabuurka ama gaadiidka dadweynaha si aad ugu wareegto meesha aad u socoto?
Runtu waxay tahay haddii aad gaariga u qaaddo meesha aad ku socoto, xitaa si ka wanaagsan. Marka hore maxaa yeelay waxaad badbaadin doontaa tikidhadaada ka dibna sababtoo ah waxaad u dhaqaaqi kartaa si xor ah haddii aad rabto. Marka, gaariga waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee tixgelinta la siinayo. Laakiin haddii aysan suurtagal ahayn, sabab kasta ha noqotee, markaa gaadiidka dadweynaha waa tan labaad. Haa, waa run in mararka qaar aan sugno waqti dheeri ah, taas oo aan nasiinaynin raaxo badan ama dabacsanaan, laakiin waa tan ugu raqiisan. Tareenka iyo baska labaduba waa xulashooyinka ugufiican ee lagu tagi karo meelo aan sidaa uga fogeyn. Tan iyo waa inaan xusuusnaano in heerkulka sare ee Ogosto uusan ku habboonayn dhaqaaqa badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Fasaxyo jaban bishii Ogosto